စတီယာရင် Knuckes ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - China STEERING Knuckles စက်ရုံ
သမိုင်း / ယဉ်ကျေးမှု
လက်မှတ် / ဖြစ်ရပ်မှန်
ထုတ်လုပ်မှု / R & D
OEM 30639780 နှင့် 30639781 ကို C ...
အရည်အသွေးမြင့်သော Spring Shock A ...
Subaru -Z1253 သည် 28313SC010 နှင့် 28313SC011 စတီယာရင် Knuck
စတီယာရင်လက်သည်းယာဉ်၏မော်တော်ယာဉ်ရပ်ဆိုင်းမှုနှင့်စတီယာရင်စနစ်များ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်သည်။ သူတို့တွင်ဘီးကိုလမ်းပြရန်ကူညီသည်။ အခြားခေါင်းစဉ်များအနေဖြင့်၎င်းအခန်း၏အခန်းကဏ္ it၊ ၎င်းပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများနှင့်အမျိုးအစားများကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသည့်နေရာတွင်ဤတွင်ကားတစ်စီးရှိစတီယာရင်လက်အကြောင်းလေ့လာပါ။ စတီယာရင်လက်ကဘာလဲ။ သင်၏သတင်းကိုသင်ကြားဖူးပါလိမ့်မည်။ သင်၏မော်တော်ယာဉ်ကိုပင်ပြန်လည်အစားထိုးရလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်စတီယာရင်လက်ကဘာလဲ၊
Ford-Z1262 အတွက် OEM 6L2Z5B759AG နှင့် 6L2Z5B759A စတီယာရင် knuckles
1.TANGRUI သည်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်အတွက်အရည်အသွေးမြင့်မားသောစတီယာရင်လက်ကိုထုတ်လုပ်ပြီးထောက်ပံ့ပေးသည်။ TANGRUI မှမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများကိုတင်းကြပ်သော OE စံနှုန်းများဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီးကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်သောစတီယာရင်လက်သည်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောစတီယာရင်လက်ထိုးပေးသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထူးခြားသောစတီယာရင်လက်လက်ဒီဇိုင်းအပြင်ပြိုင်ဘက်ကင်းသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်သက်တမ်းပိုရှည်သောကုန်ပစ္စည်းများကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ ၂. ဂူရန်ရဲတပ်၏လက်ဖြင့် ...
ACCENT ၁၉၉၅ (ရှေ့) -Z1370 အတွက် Integra စတီယာရင်ထိုး
Universal စတီယာရင်လက် -Z1558
Aveo Chevrolet-Z1571 အတွက်ဘယ်ဘက်ရှေ့ဗိုင်းလိပ်တံစတီယာရင်
စတီယာရင်လက်၏တပ်ဆင်ခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းများစတီယာရင်လက်များသည်စတီယာရင်နှင့်ဆိုင်းထိန်းအစိတ်အပိုင်းများကိုချိတ်ဆက်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်ဆိုင်းထိန်းစနစ်နှင့်စတီယာရင်စနစ်နှစ်ခုလုံး၏အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အသင်းတော်များကိုတပ်ဆင်ရန်အပိုင်းများပါ ၀ င်သည်။ ဘီးလည်း။ အဓိကစတီယာရင်လက်အစိတ်အပိုင်းများတွင်ဘောလုံးအ ၀ င်အ ၀ င်မျက်နှာပြင်၊ သို့မဟုတ်အပေါက်ပေါက်များပါ ၀ င်သည်။ ထိန်းချုပ်မှုလက်မောင်းအတွက်ဘောင်ဆိုင်းထိန်းစနစ်အတွက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် MacPherson ၏ရပ်ဆိုင်းမှုအမျိုးအစားလည်စည်းလှံတံသို့မဟုတ်စတီယာရင်လက်မောင်းအတွက်မော်တာတပ်ဆင်ထားသောဘောလုံးပူးတွဲသို့မဟုတ်အောက်ထိန်းချုပ်မှုလက်မောင်းအမှတ်များ။
4230506130 စတီယာရင် KNUCKLES Toyota Avalon-Z1254 အတွက်
MAZDA-Z1620 အတွက် Tangrui စတီယာရင်ထိုးမှန်
DAEWOO LACETTI-Z1263 အတွက် 96488824 စတီယာရင်လက်ကောက်
Subaru Forester -Z1330 အတွက် universal စတီယာရင်ထိုး
Volkswagen Beetle-Z2271 အတွက် Tangrui ရှေ့ဘီးတပ်ဘီးထိုး
အရည်အသွေးမြင့်သောလူမီနီယမ်ရှေ့ပိုင်းရိုး Knuckle စတီယာရင် Knuckle-Z1432
ANHUI TANGRUI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CO ။ , LTD ၏စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်သည်“ အလုပ်အကိုင်သည်အထူးကျွမ်းကျင်ပြီးအောင်မြင်မှုသည်စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်သည်” ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကအားဖြင့်နည်းပညာကိုယူပြီးစတီယာရင်လက်၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကတိကဝတ်ပြုထားကြသည်။
116 # Fangzheng လမ်းမကြီး Wuhu Jiujiang မြစ်စီးပွားရေးနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန်
ဖုန်း + 86-553-2590369
ဘီး Hub, Shock Absorber Rubber, ပါးပျဉ်း Shock Absorber, တာယာဘောလုံးပူးတွဲ, ရှေ့ ဦး စွာစတီယာရင်လက်, Shock Absorber Bolt သည်,